Sida caadiga ah, Salesforce Suuqgeynta Cloud (SFMC) kuma darin Google Analytics si loogu dhejiyo doorsoomayaasha su'aalaha raadraaca UTM ee xiriiriye kasta. Dukumentiga ku jira isdhexgalka Google Analytics wuxuu caadi ahaan tilmaamayaa Google Analytics 360 isdhexgalka… waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tan eegto haddii aad runtii rabto inaad gorfayntaada u qaado heerka ku xiga maadaama ay kuu ogolaanayso inaad ku xidho ka-qaybgalka goobta macaamiisha ee Analytics 360 warbixinnadaada Suuqgeynta Cloud . Isku dhafka Ololaha Raadinta Google Analytics ee aasaasiga ah,
Toddobaadkan shaqada, mid ka mid ah macaamiisheena ayaa weydiinayey waxa ay "kale" ilaha taraafikada ee Google Analytics (GA). Ma jiro faahfaahin aad u badan oo ku saabsan isugeynta dhabta ah ee Google Analytics sidaa darteed waa inaad qoddaa xoogaa qodis ah. Ilaha taraafikada waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dhexdhexaadka GA. Waxoogaa qodis ah ayaan sameeyay waxaanan ogaaday in Google Analytics ay si toos ah toos ugu dhexdhexaadinayso dhexdhexaadiyaal kale, midka ugu caansan ayaa ah email. Si aad u hesho liiska